शास्त्रका अनुसार यी ३ राशि भएका पुरुषलाई पाउन मरिहत्ते गर्छन् युवतीहरू… जानिराखौ ! – Pradesh Online Khabar
शास्त्रका अनुसार यी ३ राशि भएका पुरुषलाई पाउन मरिहत्ते गर्छन् युवतीहरू… जानिराखौ !
विचारNo Comment on शास्त्रका अनुसार यी ३ राशि भएका पुरुषलाई पाउन मरिहत्ते गर्छन् युवतीहरू… जानिराखौ !
काठमाडौँ– ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यस्ता केही राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका पुरुषहरू प्रति महिलाहरू धेरै नै आकर्षित हुन्छन् । धेरै जसो युवतीहरूको आफ्नो उमेर परिपक्व भैसकेपछी आफ्नो जीवन साथीको बारेमा हर समय सोच्ने गर्दछन् । कि धेरै माया गर्ने असल जीवन साथी परोस् । यसो त केटाहरूले नसोच्ने भन्ने पनि होइन । केटाहरूले पनि आफ्नो जीवनमा एउटा दुख सुखमा साथ दिने राम्री श्रीमती परोस् भन्ने कुरा सोचिरहेका हुन्छन् ।ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आज हामीहरू यस्ता केही राशिको बारेमा बताउन गएका छौ जुन राशि भएका महिलाहरू पुरुष प्रतिआकर्षित हुने गर्छन्।
सिंह राशि : सिंह राशी भएका पुरुषहरु आकर्षक हुनुको साथै प्रेमीका प्रति बफादार हुने गर्छन् । उनीहरु आफ्नो प्रमिकालाई खुसी बनाउन हर तरिकाले प्रयासरत हुने भएकाले युवतीहरु यो राशीका पुरुषसँग मरिहते गर्छन् । प्रेमिकालाई आफ्नो मुटु जतिकै ठान्ने भएकाले जस्तो सुकै हद पनि पार गर्न सक्षम हुन्छन् । मकर राशि : यो राशी भएका पुरुषहरु आफ्नो स सानो कुरामा पनि खुसी हुने गर्छन् । उनीहरु आफ्नो प्रेमीलाई खुसी बनाउन धेरै तरिका लगाउँछन् । बोलीमा मात्र हैन व्यवहारमा पनि सफा भएको कारण यो राशी भएका पुरुषहरु युवतीको रोजाइमा पर्ने गर्छन् ।कन्या राशि : कन्या राशी भएका पुरुषहरु निकै भावुक हुने गर्छन् । यो राशी भएका पुरुषहरुले आफ्नो प्रेमीका हरेक भावनालाई कदर गर्छन् । प्रेमीकालाई दुख नहोस भन्ने मनाशय बोकेका हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो प्रेमीकाको गल्तीमा सजिलै माफी दिन सक्ने खुबी भएका हुन्छन् ।
यि ३ राशी हुने छोरी बुहारी हुन्छन् लक्ष्मी समान, घरलाई बनाउँछन् स्वर्ग…: वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु भनेको महिला पुरुषको मिलन मात्र नभई दुई परिवारको मिलन पनि हो । पारिवारिक मेलमिलाप र वैवाहिक जीवन सुखमय भएमा मात्र जीवन सुखद रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ । आफ्नो जिवनमा आउने जीवन साथी उत्कृष्ट परोस् भन्ने हरेक पुरुषको चाहाना हुन्छ । उस्तै परिवारले पनि बत्तिसै लक्ष्निले युक्त बुहारीको आस राखेका हुन्छन् । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक व्यक्तिको भविष्य कस्तो रहने भन्ने बारे अडकल लगाउने गर्दछन् । फरक फरक राशि अनुसार मानिसमा हुने भाग्य र व्यवहार फरक हुने गर्दछ । विवाहको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसारको वैवाहिक सम्बन्ध साथै परिवाको निर्धारण रहने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका यी तल दिइएका उल्लिखित राशि हुने युवतीहरू धेरै सफल र राम्रा बुहारी बन्न सक्छन्।
वृष राशीः वृष राशि हुने युवतीहरु धेरैनै समझदार हुन्छन्। आफ्नो मात्र खुशी मात्र नभई पूरै परिवारको खुशीलाई यस राशि हुनेहरु प्राथमिकतामा राख्छन्। अभावमा पनि चित्त बुजाउन सक्ने हुँदा परिवार माथि आइलाग्ने हरेक दुखमा वृष राशि हुने बुहारीहरुले साथ दिन्छन्। शहनशक्तिले भरिपूर्ण हुनाले पनि यस राशि हुने बुहारीहरु उत्कृष्ट मानिन्छन्। निर्णय लिने मामलामा पनि यस राशि हुनेहरु समझदार मानिन्छन्। कन्या राशिः कन्या राशि हुने महिलाहरु शान्त स्वभावका हुन्छन्। कुनै पनि विषयमा छिट्टै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्। कलह देखि पनि कन्या राशिहुनेहरु टाढा रहन रुचाउँछन्। जसकारण बुहारीको रुपमा कन्या राशि हुने युवतीहरु उदाहरणनै बन्न सक्छन्। परिवारको हरेक कार्यमा आफ्नो सहभागिता जनाउने हुँदा परिवार खुशी रहन सक्छ। आर्थिक मामिलामा पनि कन्या राशि हुने बुहारीहरु बुद्धिमानी मानिन्छन्। मीन राशिः मीन राशि हुने बुहारीहरु पनि उत्कृष्ट मानिन्छन्। उनीहरु आफू भन्दा पनि परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्छन्। परिवारमा आइपर्ने दुख माथि उनीझरुको विशेष निगरानी रहने गर्छन् दुखको समयमा परिवारलाई उचित सल्लाह दिन्छन्। यति मात्र नभई उचित कदम चाल्न सक्ने समेत यस राशि हुने बुहारीहरुमा क्षमता हुन्छ। बाहिरी उकसाहटमा कुनै पनि कदम चाल्नु अगाडी धेरै सोच्ने हुँदा पनि मीन राशि हुने बुहारीहरु लक्ष्मी समान हुन्छन्।
यी राशि भएका पुरुषले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राख्छन् : ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका पुरुहरूले आफ्नो श्रीमती, प्रेमिका को हरेक दुख सुख, खुसीमा साथ दिने र रमाउने हुन्छन् ।उनीहरू श्रीमती, प्रेमिकाको प्रेममा पागल समेत बन्न सक्छन् । यस्ता राशि भएका पुरुषले जीवनमा आफ्रनो श्रीमतीको हरेक इच्छा,चाहाना पुरा गर्न सफल भएका हसन्छन् । आफ्नो श्रीमती लाइ धेरै माया गर्ने कुरा ज्योतिष शास्त्रले पुष्टि गरेको छ। ती राशि कुन कुन हुन् त हेर्नुहोस् । वृश्चिक राशीः यो राशी भएको पुरुष सबैको प्यारो हुने गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी प्रति बफादार हुने भएकाले परिवारको मात्र नभएर समाज प्रति पनि निकै जिम्मेवारी रही हेरचाह गर्ने गर्छन् । सामाजिक काममा सधै व्यस्त रहने भएकाले यो राशी भएका व्यक्ति मान सम्मान पाउने गर्छन् । ओएसनेपालका लागी काम गर्दै आउनु भएका ज्योतिषी सुराचार्यका अनुसार परिवारको प्यारो मान्छे पत्नीहरुको प्रेममा पागल हुने गर्छन् भने एकअर्कालाई राम्रो सँग बुझेको हुन्छन् त्यसकारण उनीहरुले सखी जीवन बिताएका हुन्छन् ।
मेष राशीः यो राशी हुने व्यक्तिहरुको पति पत्नी बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनाले एकअर्काको प्रेममा पागल हुने गर्छन् । एकअर्काको समस्या बुझ्ने र एक अर्काको समस्या पुरा गर्न सक्ने भएको हुनाले उनीहरुको व्यवहार पनि अत्याधिक राम्रो हुने गर्छ । यो राशी भएका पुरुषहरु बफादार हुने भएकाले पत्नीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने गर्छ । सिंह राशीः उक्त राशी भएका पुरुषहरु पत्नीले भन्दा बढी माया गर्ने गर्छन् । तर यो राशी भएका पुरुषहरु अरु राशी भएका भन्दा जिद्दी र रिसालु स्वभावका हुन्छन् । यो राशी भएका पुरुषहरुको जोडी एकअर्कालाई बुझ्न सक्ने भएकाले उनीहरुको घर व्यवहार सहज ढंगले चलाउन सक्छन् । कन्या राशीः खुल्ला हृदय भएका यो राशीका पुरुषहरुको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ । उनीहरु आफ्नो पत्नीको प्रेममा गहिरोसँग डुबेका हुन्छन् । घरायासी काम बाहेक सामाजिक काममा पनि अग्रसर रहने हुनाले मान र प्रतिष्ठा पाउने गर्छन् ।एजिंसी
यतिबेला सुत्नुभयो भने धनको नाश : हेर्नुहोस के गर्ने
हारभित्रको भावुक कथा : नेपाली बाबाआमाकी भारतीय छोरी
पैसाको अभाब भैरहन्छ यसो गर्नुहोस्, खुल्छ भाग्यको ढोका मिल्छ ठुलो धन लाभ
शास्त्रका अनुसार महिला यी ३ राशि भएका पुरुषलाई पाउन मरि’हत्ते गर्छन् युवतीहरू
अब पसिना गनाउने समस्या देखि छुटकारा पाउन यसो गर्नुस् ! अचम्मित पर्नुहुनेछ